एमालेको कारण माओवादी ३ टुक्रामा विभाजन हुने निश्चित, क-कसले गर्दैछन् विद्रोह ? – नेपाली सूर्य
एमालेको कारण माओवादी ३ टुक्रामा विभाजन हुने निश्चित, क-कसले गर्दैछन् विद्रोह ?
December 19, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on एमालेको कारण माओवादी ३ टुक्रामा विभाजन हुने निश्चित, क-कसले गर्दैछन् विद्रोह ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी एकतासम्म गर्न सक्ने भन्दै बाम तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएको माओवादी केन्द्रका लागि त्यही तालमेल र एकताको बिषय घाडो हुने भएको छ ।
यस्तो छ विद्रोही पक्षको तयारी !
माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले इमान्दार मिडियासँग गरेको गोप्य कुराकानीमा भनेका छन् – ‘विद्रोही नेताहरुले एमालेसँग हुने एकतालाई रोक्न अधिकतम प्रयास गर्नेछन् । नसके पार्टी एकताको विरोध गर्दै पार्टीबाट अलग्गिएर माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठन गर्न तिर लाग्ने छन् ।’
यस्तो छ माओवादी विभाजनको शृंखला !
एमालेसँगको एकताका बारेमा पार्टीभित्र फरक मत राखिरहेका भएपनि अन्ततः यी दुवै नेताको पनि आ-आफ्नो रणनीति छ । एमालेसँग एकता गर्न नहुने बिषयमा एकै ठाउँमा देखिएको भए पनि यि दुवै नेताले आफूसँग समान धारणा राख्ने पार्टी नेता कार्यकर्तासँगको अलग-अलग छलफल तीव्र पारेको समेत सूचना इमान्दार मिडियालाई प्राप्त भएको छ ।
इमान्दार मिडियाबाट साभार
December 16, 2017 Nepali Surya
December 12, 2017 December 12, 2017 Nepali Surya